Allocadia: Manamboara, manara-maso ary refeso ny lamin'ny varotrao amin'ny fahatokiana sy fifehezana lehibe kokoa | Martech Zone
Ny fitomboan'ny fahasarotana sy ny fanerena mihombo hanaporofoana ny fiatraikany dia antony roa mahatonga ny fanamby sarotra kokoa ankehitriny noho ny teo aloha. Ny fitambaran'ny fantsona misy bebe kokoa, ny mpanjifa misimisy kokoa ny fahalalana, ny fiparitahan'ny angon-drakitra, ary ny filàna tsy tapaka hanaporofoana fa mandray anjara amin'ny fidiram-bola sy tanjona hafa dia nahatonga ny tsindry mihombo amin'ny mpivarotra mba ho lasa mpandinika tsara sy mpitantana tsara kokoa ny tetibolany. Saingy raha mbola mikatona izy ireo manandrana manara-maso izany rehetra izany amin'ny takelaka dia tsy haharesy velively ireo fanamby ireo. Mampalahelo fa izany no status quo 80% amin'ireo fikambanana araka ny fanadihadiana natao tato ho ato.
Topimaso momba ny vahaolana amin'ny fitantanana ny varotra Allocadia
Midira Allocadia, vahaolana momba ny fitantanana ny fahaiza-manao amin'ny marketing amin'ny rindrambaiko nomen'ny mpivarotra, ho an'ny mpivarotra, izay manolotra fomba tsara kokoa hananganana drafi-barotra, hitantanana ny fampiasam-bola ary hamantatra ny fiantraikany amin'ny orinasa. Allocadia dia manafoana ny takelaka rehetra momba ny fandrindrana sy ny tetibola ary mamorona fahitana amin'ny fotoana tena izy momba ny satan'ny fandaniam-bola sy ny ROI marketing. Amin'ny alàlan'ny fanampiana ireo mpivarotra hampihazakazaka ny marketing amin'ny fomba mahomby kokoa, Allocadia dia manampy ny mpivarotra hanao Marketing amin'ny fomba mahomby kokoa ihany koa.
Ny sehatra Allocadia dia mizara telo fahaiza-manao fototra: ny drafitra, ny fampiasam-bola ary ny refy.
Mikasa miaraka amin'i Allocadia
Andao atomboka amin'ny tsingerin-drafitra fanaonao isan-taona. Allocadia dia mametraka rafitra sy taxonomia manara-penitra momba ny fomba handehanananao sy ny ekipanao amin'ny fananganana ny drafi-barotra. Na voalamina amin'ny jeografia, vondrona orinasa, vokatra, na fitambarana voalaza etsy ambony, ny firafitr'i Allocadia izay miovaova dia haneho ny fomba tianao hijerena ny orinasanao. Mamorona fotsiny ny ambaratongam-pahefana tadiavinao, avy eo manomeza lasibatra fandaniana ambony ambany. Izy io dia misy ny tapany voalohany amin'ny drafitrao, ary manome torolàlana mazava ho an'ireo tompona teti-bola amin'ny fomba tokony hizarana ny fampiasam-bolan'izy ireo hatrany ambany (ny tapany faharoa), amin'ny fomba izay mifanaraka tanteraka amin'ny laharam-pahamehana sy ny laharam-pahamehana.
Miaraka amin'ny olona mampiasa rafitra iray ihany, manaraka ny fifanarahana anarana mitovy, ary manisy marika ny zavatra amin'ny fomba mifanaraka amin'izany, dia azonao atao izao ny manorona ireo drafitra farany ambany rehetra ho lasa fomba fijery iray manontolo sy iraisan'ny rehetra. Ho azonao atao ny mahita hoe rahoviana ary aiza no kasaina hilatsaka ny fandaharanonao rehetra, ohatrinona ny vidiny, ary inona no ho vokatr'izany eo amin'ny fidiram-bola.
Fampiasam-bola miaraka amin'i Allocadia
Raha vantany vao mandeha ny fotoana voatondro dia tsy maintsy fantatry ny mpivarotra ny toerana iorenan'izy ireo amin'ny fandaniana sy ny teti-bola misy mba hahafantaran'izy ireo hoe ohatrinona ny efitrano tokony anamboarany sy hanamboarany. Fa raha miantehitra amin'ny ekipa kaonty izy ireo hahazoana izany vaovao izany, dia mety hiandry ela loatra izy ireo na tsy hahazo ny angon-drakitra ilainy amin'ny endrika mety. Izany dia satria ny fitantanam-bola dia mijery an'izao tontolo izao amin'ny kaonty GL, fa tsy programa na hetsika toa ny ataon'ireo mpivarotra.
I Allocadia dia mamaha an'io olana io amin'ny alàlan'ny fanafarana sy fanaovana sarintany faktiora avy hatrany ny vola avy amin'ny Vola kaonty amin'ny teti-bola mety ao Allocadia mba hahitan'ny mpivarotra avy hatrany izay laniny, izay kasain'izy ireo holaniana, ary izay sisa laniny. Ankehitriny izy ireo dia afaka ho vonona amin'ny fotoana mety rehefa miakatra izy ireo, tsy manahy ny amin'ny fandaniambola na amin'ny tetibola. Satria rehefa tapitra ny vanim-potoana dia matetika tsy mitondra latabatra ny fitondrana teti-bola tsy ampiasaina.
Fandrefesana valiny miaraka amin'i Allocadia
Ny dingana farany amin'ny lalana mankany ROI dia matetika no sarotra indrindra. Ny fahazoana mampifamatotra ny fantsom-pifandraisana sy ny fidiram-bola amin'ny hetsika marketing sy fampielezan-kevitra dia fanenjehana sarotra - alohan'ny Allocadia. Amin'ny fampifandraisana mivantana ny angona CRM amin'ireo entana andalana ao Allocadia, dia manamora ny fampifandraisana ireo teboka eo anelanelan'ny fampiasam-bolanao sy ny fiantraikan'izy ireo. Azonao atao izao ny manana ny resaka amin'ny Marketing ROI, ary asehoy amin'ny sisa amin'ny orinasa fa ny zavatra ataonao dia mitondra fiatraikany marina sy azo refesina amin'ny orinasa. Miaraka amin'ny maodely fanodinana mahery sy ny antsipiriany momba ny ROI amin'ny tanjona, hampahafantarina anao kokoa ny manapa-kevitra hoe aiza no andanianao ny dolara marketing manaraka.
Alefaso tsara ny marketing mba hahafahanao manao marketing tsara kokoa
Manomboka amin'ny fitaovana maodely fidiram-bola ka hatramin'ny drafitry ny scenario ary ary ny fanamarihana azo amboarina, ny Allocadia dia misy fahaiza-manao maro hanampiana anao Run Marketing amin'ny fomba hentitra, tsy miovaova ary azo vinavinaina. Hamonjy anao ny fotoana sy ny ezaka amin'ny fandaminana sy ny teti-bola hahafahanao mifantoka bebe kokoa amin'ny famolavolana sy fanatanterahana fampielezan-kevitra mamirapiratra mamokatra vokatra tsara indrindra.
Allocadia amin'ny isa *:
Ora salan'isa voatahiry amin'ny drafitra sy ny tetibola: 40-70%
Ny habetsaky ny fampiasam-bola tsy mandeha amin'ny laoniny: 5-15%
Fanatsarana ny harato amin'ny ROI Marketing: 50-150%
Fotoana famerenam-bola amin'ny fampiasam-bola Allocadia: latsaky ny 9 volana
* Araka ny notaterin'ny mpanjifa Allocadia
Fomba fanao tsara indrindra amin'ny fitantanana ny fahombiazan'ny marketing
Ny fanatsarana ny fahombiazan'ny varotrao dia fitsangatsanganana amin'ny dingana matotra dimy. Izahay dia namintina ireo dingana ireo ary nanipy tsara ny fomba handrosoana amin'ny dingana tsirairay ao aminay Modelin'ny fahamatorana amin'ny fahombiazan'ny marketing. Ao anatin'izany no hianaranao mamantatra ny misy anao ankehitriny, ary ny zavatra tokony hataonao handroso amin'ny dingana manaraka.
Toy izao ny fahitana avy any ambony:
Mametraka a Ivon-toerana Marketing Marketing izay manintona, manofana ary mitazona ny talenta tsara indrindra amin'ny orinasa, ao anatin'izany ireo olona manana angon-drakitra matanjaka sy fahaiza-mandinika.
Ampifanaraho amin'ireo ao anaty ny ezaka ataonao Varotra sy vola, hatramin'ny teboka izay mpanolotsaina azo itokisana ary takatry ny Sales ny fomba sy ny anjara biriky omen'ny Marketing amin'ny laharana voalohany.
Mametraka mazava, azo tratrarina, Tanjona SMART isaky ny ambaratongan'ny fikambanana Marketing, ary soloina metrika 'zava-poana' toy ny mpitsidika tranokala sy ny mailaka misokatra miaraka amin'ny metrikotra sarotra kokoa toy ny vidin'ny vidiny isaky ny mitarika, ny fandraisana anjaran'ny fantsona ary ny ROI.
Esory ny silo data, manara-penitra manodidina ny taxonomia sy ny rafitra voafetra ary mametraka loharano iray ho an'ny fahamarinana ho an'ny fandaniana marketing sy ny fiantraikany. Ampiasao ny angonao momba ny hetsika prescriptive.
Invest in a stack teknolojia marketing izay mampiasa ireo fitaovana farany nampiana sanda, miaraka amin'ny sari-tany mazava momba ny toerana kasainao haleha miaraka amin'ny stack anao rehefa mivelatra ny orinasa. Ny tena fotony dia ny vahaolana CRM, automatisation marketing anao ary MPM.
Te hahafantatra ny fomba itehirizanao ny maodelin'ny fahombiazan'ny marketing amin'ny fahamatorana? Raiso ny fanadihadianay tombana ary ampitahao amin'ny valiny amin'ireo mpivarotra 300 mahery eran'izao tontolo izao ny valiny!
Raiso ny fanadihadiana momba ny fanombanana ny varotra
Allocadia dia manompo orinasa B2B amin'ny sehatra maro, anisan'izany ny Teknolojia, Fitantanam-bola & Banky, Manamboatra, Serivisy, ary Travel & Hospitality. Ny mpanjifa mombamomba ny idealy dia manana ekipa misy mpivarotra 25 na mihoatra ary / na paikady marketing marobe sy fantsona marobe izay mandrakotra jeografia, vokatra na sehatry ny orinasa maro.
Fandinihana tranga momba ny fitantanana ny fahombiazan'ny marketing - Allocadia
Ny asa fanompoana ara-bola dia mihetsika haingana sy mifaninana indrindra, indrindra rehefa manompo tsena marobe ianao. Ao amin'ny Charles Schwab, izany dia adika amin'ny teti-bola lehibe sy marin-danja amin'ny famindrana toerana matetika ary ivontoerana maherin'ny 95. Mba hahasarotra kokoa ny raharaha, ny ekipa ao amin'ny Charles Schwab dia mihazona ny fenitra fandaniam-bola avo lenta, mikendry tanjona -2% ka hatramin'ny + 0.5% amin'ny tetibola.
Allocadia dia nanampy an'ity ekipa mpivarotra marobe ity hiala amin'ny takelaka ary hanamafisana ny volan'ny varotra ao anaty rafitra tokana sy mirindra ary manara-penitra izay nitahiry ny filan'izy ireo ho malefaka sy mandray andraikitra amin'ny fanovana. Miaraka amin'ny fizotry ny teti-bola tsotra sy haingana kokoa ary fahitana tsara kokoa amin'ny fampanjariam-bola, ny mpivarotra ao amin'ny Charles Schwab dia mpitantana tsara kokoa ny tetibola amin'ny varotra ary mpitantara tantara tsara kokoa ny fiantraikan'izy ireo amin'ny orinasa.
Ampidino ny fandinihana tranga
Dingana dimy hampitomboana ny fahombiazan'ny varotrao
Tags: allocadiatsara indrindratabilao marketingfahamendrehana amin'ny marketingtanjon'ny marketingfampisehoana marketingfitantanana fahombiazan'ny marketingfantsom-barotradrafitra marketingdrafitra marketingstack teknolojia marketingstack martechrefesina marketingmpmmanan-tsaina
6 Fanalahidin'ny fahombiazan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny fampiasana media sosialy